Madagasikara: Anglisy teny ofisialy, fanomezam-boninahitra ireo lasibatry ny fifanandrinana ara-panjanahantany sy ny rivodoza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2018 4:01 GMT
(Lahatsoratra tamin'ny avrily 2007)
Fenofeno ny vaovao teto Madagasikara tanatin'ny tapabolana faharoan'ny volana marsa 2007: indrindra fa tamin'ny zavatra 3 nifampiresahan'ny samy bilaogera malagasy:
1) An-dalana amin'izao fotoana izao ny fitsapa-kevi-bahoaka eto Madagasikara. Tahaka izao manaraka izao no hanontaniana ny Malagasy ka hovaliany:
“Acceptez-vous ce projet de révision de la Constitution pour le développement rapide et durable par région, afin d'améliorer le niveau de vie des Malgaches?”.
“Ekenao ve ny volavolam-panitsiana ny Lalampanorenana ho fampandrosoana haingana sy maharitra ny isa-paritra, mba ahafahana mampakatra ny fari-piainan'ny Malagasy?”
Iray amin'ny volavolam-panorenana ny fampidirana ny fisantaran'andraikitra antsoina hoe MAP. Misy lalaon-teny roa ao anatin'io fanafohezan-teny io izay manasongadina ny zotra vaovao tian'ny Filoha Marc Ravalomanana ho an'i Madagasikara. MAP mijoro ho Madagascar Action Plan sady mijoro ihany koa amin'ny teny malagasy manao hoe Madagasikara AmPerin'asa. Ny zavatra hita, iray amin'ny fanitsiana ny lalampanorenana ny fampidirana ny teny anglisy ho teny ofisialy. Zava-dehibe izany ho an'i Madagasikara amin'ny finiavany hampivelatra bebe kokoa ny tsenany. Mazava loatra fa tsy afa-tsikera izany tolo-kevitra izany satria miteraka adihevitra hatrany izany fiteny izany teto Madagasikara. 30 taona lasa izay, nizotra ho amin'ny famolavolana ny teny malagasy ho hany teny ofisialy i Madagasikara. Hita ho fikasana hanalavitra bebe kokoa amin'ny herim-panintonan'i Frantsa izany. Ankehitriny ny fanovanana ny teny anglisy sy ny fanamafisana indray ny malagasy ho teny ironana dia ho hita indray ho fanalavirana bebe kokoa indray an'i Frantsa. Tsy mbola matoky i Manny sy ny bilaogera hafa ny amin'ny fomba ifidianana sy ny hanaovana ny fanovanana ny teny anglisy ho teny ofisialy. Manoratra i Elodieriana:
Teny ofisialy 3….ho avy haingana ny fandikana ny antonta-taratasy ofisialy….ho 3 ny tsanganan'ny fandikan-teny ny lalampanorenana ?
Maro amin'ny bilaogera ihany koa no mbola tsy mahafantatra marina izay atao amin'io “MAP-zavatra” io, teboka iray lehibe hafa amin'ny fitsapa-kevi-bahoaka: Manoratra i Mikozatra fa maro no mety tsy namaky manontolo ny MAP fa vita tsara kosa ny fanatontosana sy ny endriky ny boky, araka izay amafisin'ity mpanolotra amin'ny onjampeo ity:
En première page donc Plan d’action Madagascar 2007-2012 Plan Audacieux (avec un grand A) pour le développement rapide.
Et la photo d’un jeune garcon, trés bien, joli sourire, dentition parfaite. A l’intérieur, ll y a plein de photos également, un véritable
diaporama du président en campagne, à la campagne, et des malgaches, de paysages, la flore.. tiens pas de lémuriens ?
Amin'ny pejy voalohany, Planin'Asa ho an'i Madagasikara 2007-2012 Sahisahy ho amin'ny fampandrosoana haingana. Sy ny sarin'ny tanoralahy iray, mitsiky tsara, tsara nify. Feno sary ihany koa ao anatiny, tena sary misesy ahitana ny filoha manentana, eny an-tsaha, sy malagasy maro, sy endri-tany, sy zavamaniry… oadray toa tsy misy babakoto?
Nivoaka ny vokatra voalohan'ny referandaoma ary dia misy sahady ny ahiahy avy amin'ny gazety amin'ny fahamarinan'ny vokatra.
2) Nanoka-potoana hahatsiarovana ireo olona an'arivony lasibatry ny “fitroaran'ny 29 marsa” nanoherana ny fibodoana frantsay i Madagasikara. Nandrika tokoa ny ra tamin'io andro io ka nahatonga ny gazety frantsay “Le Monde” nanasokajy azy ho iray amin'ny fifanandrinana nampivarahontsana indrindra nandritra ny fanjanahantany frantsay.
…soulèvement qui fut l’une des premières manifestations nationalistes dans l’empire français. La répression, avec près de 100 000 morts un des grands massacres coloniaux de l’après-guerre, sur lequel la France a étendu un voile de silence , a fauché toute une génération de cadres malgaches
…fitroarana iray amin'ireo fihetsiketsehana nasionalista voalohany tao amin'ny ampira frantsay. Ny famoretana, izay manakaiky ny 100.000 ny isan'ny maty, iray amin'ny fandripahan'olona nandritra ny fanjanahantany taorian'ny ady lehibe, izay nosaronan'i Frantsa ny voalin'ny fahanginana, sy nandamahany taranaka malagasy mpitarika iray manontolo.
Nanoka-potoana fahatsiarovana ireo niharam-boina ihany koa ny bilaogera malagasy tamin'ny alalan'ny fanangonana ireo sombin-dahatsoratra miresaka io toe-javatra io, nangonin'i Nivo ato ny ankamaron'izy ireny.
3) Farany, nisy rivodoza hafa nandalo ny nosy indray tamin'ity herinandro ity. Jayla no anaran'ilay farany indrindra ary izy no fahaenina tamin'ny karazany tao anatin'ny enimbolana, samy nandravarava avokoa ny tsirairay amin'izy ireo. Nitatitra ny filazana ofisialy fa 8 no maty ary rava ny atsasaky ny tanànan'i Sambava.